Cheick Tiote Oo Geeryooday Issaga Oo Tababar Ku Qaadanaya Garoon Cayaareed Ku Yaala Shiinaha – Heemaal News Network
HomeWararka Af SoomaligaCayaarahaCheick Tiote Oo Geeryooday Issaga Oo Tababar Ku Qaadanaya Garoon Cayaareed Ku Yaala Shiinaha
Cheick Tiote Oo Geeryooday Issaga Oo Tababar Ku Qaadanaya Garoon Cayaareed Ku Yaala Shiinaha
Cheick Tiote oo horay ugu ciyaari jiray kooxda Newcastle ayaa geeriyooday isagoo ku jirray tababar.
Tiote ayaa mudo todobo sano ah u ciyaari jirray kooxda Newcastle. Waxa uuna u dhashay dalka Ivory Coast.
Ciyaaryahankan ayaa dheellay 150 ciyaarood sadax xilli ciyaareed oo la soo dhaafay.
Waxa uu hadda u ciyaarayay koox dalka Shiinaha ka dhisan oo lagu magacaabo Beijing Enterprises. Cheick Tiote waxa uu ku dhashay dalka Ivory Coast.
Waxa uuna ka mid ahaa ciyaaryahanadii dalkiisa u qaaday tartarkii Afrika.
Waxa uu ahaa taariikhda ciyaarihiisa ka soo bilaabay dalka Biljimka sanadkii 2005-tii.
Ka dibna waxa uu u wareegay dalka Natherlands. Tiote oo qadka dhexe ka ciyaari jiray waxa uu kooxda Newcastle ku soo biiray 2010-kii.
Isagoo lagu soo iibsaday 3.5 Milyan oo Euro. Ciyaaryahankan waxaa lagu xusuustaa gool uu ka dhlaiyay kooxda Arsenal 2011-kii oo noqday mid xusuusta galay.
Halkan Ka Daawo Goolkaa.
Tiote waxa uu ka mid noqn doonaa ciyaaryahano badan oo iyagoo garoonka ku jirra geeriyooday.
Cayaaraha	English News	Syria conflict: US jet ‘downs Iranian-made drone	English News	Shabaab details last week’s deadly assault in northern Somalia	English News	Somali survivors tell of bloody restaurant siege by rebels	English News	Hargeisa To Join Air Arabia’s African Network	English News	FACT FILE: Climate change, food security, and adaptation	English News	‘There is no blockade… Qatar is free to go,’ says Saudi FM	English News	UAE expels Somali from Ramadan competition over Qatar row	English News	AFRICOM Imam Leads First Iftar Uith U.S., SNA Leaders	English News	Landlocked Ethiopia Eyes Role in DP World-Managed Somali Port	English News	Somalia’s president vows revenge on al Shabaab after deadly attack	PreviousWariye Coldoon Oo Soo Bandhigay Maxbuus Mudo Badan ku Xidhnaa Xabsiga Burco.
NextTheresa May Oo La Filaayo Xisbigeedu In Uu Lumiyo Kuraasi Badan Oo Baarlamaanka Ah
Cayaaraha	Xaflad Sagoontin Ah Oo Loo Sameeyey Kooxda Gobolka Banaadir Ee Sharaf Dishay Magacii Xulka Qaranka Soomaliyeed	3rd May 2017
Ganacsatada Soomaliyeed ee dalka Koofurta Suudaan iyo Safaaradda Somalida ayaa xafalad sagoontin ah u qabtay koox ku ciyaarasay xulka kubbada cagta ee qaranka Soomaliya.
Cayaaraha	Alvaro Morata Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Mugdiga Uu Galiyey Tababare Zinedine Zidane	28th January 2017
Weeraryahanka Real Madrid Alvaro Morata ayaa bogiisa bulshada waxa uu kaga jawaabceliyay warar la isla dhexmarayo oo la xiriira mustaqbalkiisa ka dib markii barnaamijka ‘El Larguero’ uu baahiyay in Morata uu ku wargeliyay wakiilkiisa inuu […]